PRISM: Qaab Lagu Hormarinayo Beddelaaddaada Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
PRISM: Qaab Lagu Hormarinayo Beddelaaddaada Warbaahinta Bulshada
Arbacada, Nofeembar 2, 2016 Khamiis, Maarso 4, 2021 Ian Cleary
Xaqiiqdu waxay tahay inaadan sida caadiga ah wax ku iibin kanaallada warbaahinta bulshada laakiin waxaad ka abuuri kartaa iibinta warbaahinta bulshada haddii aad hirgeliso gebi ahaanba geedi-socodka dhamaadka.
Nidaamkayaga PRISM 5 waa nidaam aad u adeegsan karto hagaajinta beddelka warbaahinta bulshada.
Qodobkaan waxaan ku qeexeynaa 5 qaab-dhismeed oo aad u gudubto tusaale ahaan qalabka aad u isticmaali karto tillaabo kasta oo geeddi-socodka ah.
Waa tan PRISM:
Qaab dhismeedka PRISM
Si aad u dhisto PRISM-kaaga waxaad u baahan tahay inaad yeelato geedi socod weyn, nuxur iyo qalab sax ah. Tallaabo kasta oo PRISM ah waxaa jira qalab kala duwan oo ku habboon.
P loogu talagalay Dadka
Si aad ugu guuleysato baraha bulshada waxaad u baahan tahay inaad yeelato dhagaystayaal. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhisto dhagaystayaal si joogto ah laakiin waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad falanqeyso dhagaystayaashaada si aad u hubiso in dhagaystayaashu ay khuseeyaan. Macno malahan in la helo 1 milyan oo raacsan hadii aysan quseyn.
Qalab tusaale ahaan loo adeegsado ayaa ah Affinio kaas oo bixiya burburin faahfaahsan oo ku saabsan taageerayaashaada Twitter. Waxaad ku isticmaali kartaa aaladda bilaash haddii aad ka yar tahay 10,000 oo raacsan. Barnaamij kasta waxaad u baahan tahay inaad ku falanqeyso dhagaystayaashaada si joogto ah si aad u hubiso inay habboon tahay.
Si aad u hesho dhagaystayaashaada inay fiiro gaar ah kuu yeeshaan, waxaad u baahan tahay inaad xiriir la yeelatid dhagaystayaashaada. Waxaad ku dhiseysaa xiriir miisaanka iyadoo la adeegsanayo nuxur ama waxaad dhiseysaa xiriir ku saleysan 1 illaa 1 oo leh saameyn muhiim ah.
Si aad u dhisto xiriiro waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho aaladda maaraynta warbaahinta bulshada sida Agorapulse. Agorapulse waxay kuu aqoonsan doontaa dadka ku jira durdurkaaga kuwa saamaynta ku leh ama dadka sida joogtada ah ula shaqeeya. Kama dhisi kartid xiriir qof walba aasaaska 1 illaa 1 sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad isha ku hayso kuwa wax galaya ama wax galaya.
Aniga ee Gaadiidka Inbound
Kanaallada warbaahinta bulshada looguma talagalin abuurista iibka sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad hirgeliso tabo gaar ah oo looga kaxeeyo taraafikada warbaahinta bulshada illaa boggaaga. Waxaad sidoo kale ku wadi kartaa taraafikada habab kale, tusaale ahaan, adoo adeegsanaya baloog.
Hal qalab oo weyn oo kaa caawinaya inaad aqoonsato ereyada muhiimka ah si aad u abuurto waxyaabaha ku xeeran ayaa ah Xeebaha. Tusaale ahaan, waxaad ku qori kartaa magaca kuwa kula tartamaya oo aad ka heli kartaa 10ka eray ee ugu muhiimsan eray bixinta muhiimka ah ee wadista taraafikada barta ay ku leeyihiin. Waxaad markaa abuuri kartaa waxyaabo ku wareegsan ereyadan furaha ah ama kuwa la midka ah.
S loogu talagalay Macaamiisha iyo Dib-u-habaynta Bulshada
Inta badan booqdayaashaada bulsheed ma iibsan doonaan booqashada ugu horreysa sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad isku daydo oo aad qabato faahfaahintooda adoo adeegsanaya emayl. Optinmonster waa mid ka mid ah aaladaha emaylka ee ugu wanaagsan ee la heli karo.
Haddii martidu aysan bixin cinwaankooda emayl weli waad sameyn kartaa dib ugu soo celi booqdayaashan xayeysiisyada Facebook ama goobo kale.
M loogu talagalay Lacageynta
Markaa waxaad ubaahantahay inaad dhisto dhudhunka iibka ee u beddelaya martidaada ama emaylka macaamiisha iibka. Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee lacag-dejinta ayaa dejinta cabbiraadda tallaabo kasta oo ka mid ah madadaaladaada. Diinta waa qalab weyn oo tan lagu sameeyo.
Warbaahinta bulshada ayaa ku fiican dhisitaanka dhagaystayaal iyo ka warhaynta adiga, shirkaddaada, wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada.
Laakiin…. sidoo kale waxay ku fiican tahay abuurista iibka haddii aad hirgeliso gebi ahaanba dhammaadka hawsha. Waxaad ubaahantahay inaad fahanto dhamaan heerarka nidaamka iibinta bulshada oo aad hirgeliso tabo gaar ah una adeegsato qalab gaar ah marxalad kasta.
Ma u isticmaali kartaa qaab-dhismeedka iibka warbaahinta bulshada?
Tags: horumarsan baraha bulshadamasaf beddelaadmarketing inboundtaraafikada soo galajaangooyntaPRISMqaabka warbaahinta bulshadakasbashada warbaahinta bulshadaxiriirka bulshadadib-u-dejinta bulshadamacmiil dib
Ian waa agaasimaha guud ee RazorSocial wuxuuna u hibeeyay noloshiisa shaqo inuu kaa caawiyo inaad ogaato aaladaha iyo tikniyoolajiyadda ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada. Ian wuxuu si joogto ah uga hadlaa munaasabadaha (inta badan Mareykanka), wuxuuna wax u qoraa wax badan oo ka mid ah boggaga warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya.
CompanyHub: Barnaamijka CRM ee Ganacsigaaga Yar